Mihevitra Alemana fahatelo rehetra cryptocurrencies toy ny fampiasam-bola - Blockchain News
Na dia Bitcoin, Ethereum sy ny Co. dia namely mafy ny vidiny pihilan'ny vao haingana, ny lazany nanao kely hanisy ratsy azy ireo. Miisa 29 isan-jaton'ny olom-pirenena alemà mahita ny nomerika vola toy ny fampiasam-bola mahaliana. Ny solontenan'ny fanadihadiana ao amin'ny tontolon-kevitry ny Postbank Digital Fianarana 2018 nitranga teo anelanelan'ny faran'ny volana febroary sy ny faran'ny Martsa, izany hoe avy hatrany taorian'ny indraindray tena maranitra vidiny latsaka ao amin'ny niomerika vola. Manokana, ny fahaleovan-tena ara-bola ny fitsipika rafitra sy ny fanantenana ny avo lehibe miverina hanan Mahaliana an'ireo Alemà. Ny mahaliana ny tanora ary nomerika affine Alemà dia tena tononina. Ao amin'ny sokajin-taona eo 18 ary 34, efa ho iray roa (46 isan-jato) dia liana amin'ny cryptocurrencies toy ny fampiasam-bola – na dia eo aza ratsy tatitra matetika.
Media anatrehan'ny dia mampitombo liana tamin'ny Bitcoin sy Co
Taona lasa, cryptocurrency tahan'ny nitsambikina avy amin'ny firaketana an-tsoratra iray ho ambony ny manaraka, fa nanomboka tamin'ny faran'ny 2017, ny vidin-Bitcoin, be mpampiasa indrindra cryptocurrency, Nianjera mihoatra noho ny 65 isan-jato. Ny haino aman-jery tatitra be dia be momba ny fiovaovan'ny vidin'ny sy ny solontenan'ny orinasa maro miteny amin'ny fampitandremana; toy ny Deutsche Bundesbank na ny alemà Financial maso Authority Bafin. Ny feo ny manam-pahaizana, izay mialoha ny revolisiona eo amin'ny fampiasam-bola amin'ny raharaham-barotra cryptocurrencies, lasa be koa ny mangina.
“Tsara homarihina fa ny Alemà mbola liana amin'ny cryptocurrencies ho toy ny fampiasam-bola ara-bola na dia teo aza fatiantoka avo sy mivandravandra loza,” hoy i Dr. Thomas tsy fahampian'ny, Postbank Chief Digital Mpiandraikitra. “Misy tokoa ny olona izay tena mety ho very vola fotsiny satria manaraka ny saritaka.” Bitcoin no voalohany cryptocurrency in 2009, Ary ankehitriny misy mihoatra noho ny 1,500. Décentralisées tahirin-kevitra sy ny fitantanana cryptographically antoka protocols mamorona nomerika varotra tsy misy fandoavam-bola foibe manam-pahefana toy ny banky.
Ny vehivavy dia liana amin'ny tontolo fahaleovan-tena, olona eo miverina fahafahana
Izany indrindra ny fahaleovan-tena ara-bola ny nanorina rafitra izay mahaliana Alemà momba ny cryptocurrencies. Lafiny io dia be zava-dehibe kokoa ho an'ny vehivavy (60 isan-jato) noho ny ho an'ny lehilahy (51 isan-jato). Ny fahatsinjovana ny lazaina fa miverina avo, etsy ankilany, indrindra fa tiako ny olona (56 isan-jato raha oharina amin'ny 36 isan-jaton'ny vehivavy). Fa izay rehetra mpankafy ny cryptocurrencies fahatelo, anarana ihany koa zava-dehibe. Tsy toy ny, ohatra, orinasa mizara, ny olona mpampiasa vola dia tsy mahaliana. Miaraka amin'ny ara-batana tsy cryptocurrencies fizakana ny mpiasa banky na broker manan-tsaina ao an-trano fanatobiana boky. Fa izay rehetra olona liana fahadimy, misy ihany koa ny fihetseham-po toy ny thrills antony sy ny “digger volamena fihetseham-po” ny vola ao amin'ny somary vaovao nomerika amin'ny teny fampiasam-bola.
Mahaliana ny tanora indrindra fa lehibe
Ny dingana ny fampiasam-bola atao indrindra fa ny tanora. Amin'ny enina isan-jato, Hafanàm-po an teratany manana maro cryptocurrencies avo roa heny ny mponina eo ho eo. Tamin'ny roa ambin'ny folo volana manaraka, iray hafa 14 isan-jaton'ny 18- ny 34 taona-ankizy mbola te-hitombo cryptocurrencies. Across sokajin-taona rehetra, izany ihany ny valo isan-jato. “Na dia eo aza ny Mahaliana, tanora mpampiasa vola dia tsy tokony hanadino ny tolotra avy amin'ny rafitra napetraka banky. Izay efa manao ny fampiasam-bola amin'ny Fiarovana toy ny fampiasam-bola tokony ho azo antoka fa tsy vola amin'ny cryptocurrencies noho ny loza avo anjara. Noho izany karazana fampiasam-bola no tena saintsainina, “Mbola mitohy Thomas Mangel.
Fahalalana momba ny fahafahana sy ny loza dia mety ampianarina hahalala
Ny fiovaovan'ny vidin'ny avo in cryptocurrencies ary koa ny drafitra amin'ny alalan'ny banky firenena mihitsy aza izy tatỳ na hanamarina ny tenany cryptocurrencies no nitarika ho amin'ny haino aman-jery mikasika mihanaka. Ny vokatry ny fanadihadiana mampiseho fa mitarika anatrehan'ny haino aman-jery io Alemà maro hanatsoaka hevitra fa izy ireo dia tsara cryptocurrencies – satria efa namaky na nandre be momba azy ireo. 20 isan-jato ny Alemà Ary mampahafantatra ny tenany ho tena tsara, na fahalalana tsara ny cryptocurrencies. Ny tompon-tany niomerika mahatsapa na dia azo antoka kokoa eny an-kianja: 29 isan-jaton'ny 18- ny 34 taona ankizy mihevitra ny tenany “crypto connoisseurs”.
“Noho ny haino aman-jery hypes, maro ny olona manome lanja be loatra ny fahalalany ny fahafahana sy ny mety ny cryptocurrencies toy ny fampiasam-bola,” Mampitandrina Thomas Mangel. Ohatra, maro no tsy mahalala fa ny tombontsoa avy amin'ny cryptocurrencies tokony hosoratana tanteraka raha toa ka tsy nitandrina fara fahakeliny isan-taona. Ambonin'izany rehetra izany, tanteraka ny mety very, izay tsy misy ny fampiasam-bola hafa ao amin'io endrika, tsy nomena ampy fandinihana. Na iza na iza te-vola amin'ny cryptocurrencies, na izany aza, dia Nanoro hevitra ny mifidy afa-tsy ny vola fa afaka atao tsy misy.
Fototra momba ny Postbank Digital Fianarana 2018 – Ny Digital Alemana sy ny vola
Ao amin'ny vanim-potoana tamin'ny Febroary hatramin'ny Martsa tamin'ity taona ity, 3,100 Alemà no dinidinika ho an'ny Postbank Digital Fianarana 2018 – Ny Digital Alemana sy ny vola. Fa ny faninefany misesy, Ny fianarana Postbank mizaha toetra ny fivoaran'ny toe-draharaha izay vao misondrotra ao amin'ny faritra samihafa amin'ny fiainana alemà raha oharina amin'ny digitization amin'ny ankapobeny sy ny foto-kevitra ara-bola indrindra indrindra. Mba sarina ny mponina-solontenan'ny rafitra, ny santionany dia mavesatra ny fanjakana (proportionalization), taona sy ny lahy sy ny vavy. Ny boky rakitra dia miorina amin'ny Fanisam-bahoaka 2011 ny Federal Statistical Office. Ny vokatra dia boribory ny isa manontolo. Deviations ao amin'ny Tatitra Maneran-tany dia azo hazavaina amin'ny alalan'ny rounding fahasamihafana.
Raha misy mpampiasa vola no F ...
Jona 19, 2018 amin'ny 5:09 PM
Jolay 21, 2018 amin'ny 7:31 PM